» प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजकसहित १२ जनाले गरे बलात्कार !
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजकसहित १२ जनाले गरे बलात्कार !
१० असार २०७६, मंगलवार ००:०४ प्रकाशित
असार ९,बुटवल–असार २ गते दुई युवतीसँगै बसेर विष्णु थारु चौधरीले रेष्टुरेण्टमा मदिरा पिए। मदिरा पिइसकेपछि तीनै जनासँगै घर फर्किदै थिए। घर फर्किने क्रममा विष्णुले गाउँका अरु केही युवालाई बोलाए र २२/२३ वर्षे दुई युवतीमाथि सामूहिक रुपमा बलात्कार गरे।
त्यसैक्रममा शर्मिला (नाम परिवर्तन) भागिन्। उनले गुहार मागिन्। चिच्याएको आवाज सुनेपछि गाउँका केही युवा घटनास्थलमा आए। गुहार मागेपछि आएका ती युवाले गुहार दिएनन्। २ युवतीलाई १२ युवाले बलात्कार गरे।
घटना विवरणअनुसार रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका ९ का उनीहरु नागेश्वरी चोकमा थारुले बोलाएर खाजा खान आएका थिए।
चौधरीले खाजा खान बोलाएको प्रस्ताव स्वीकार गरी शित्तलडाँडाँबाट अन्दाजी-३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको नागेश्वरी चोकमा पुगेका उनीहरु साँझ ६ बजेदेखि ९ बजे सम्म होटलमा खाजा खाएर बसेका थिए।
राती ९ बजे घर पुर्‍याईदिने भन्दै चौधरीले दुई युवतीलाई मोटरसाईकलमा राखेर लैजादै गर्दा बीच बाटोमा गफ गर्ने भन्दै मोटरसाइकल रोकेर नजिकैको खेतमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारको प्रयास गरेपछि उनीहरुले गुहार मागे। यतिन्जेल रातिको सवा दश बजिसकेको थियो।
गुहार माग्न पुगेपछि हसनापुरका ५ जना युवाहरु लाठीसहित अर्की साथी भएको स्थानमा पुग्दा त्यहाँ अरु ८÷१० जना युवाहरु जम्मा भइसकेको युवतीको भनाई छ।
गुहार दिन लाठीसहित गएका स्थानीय प्रकाश रिजाल, राजिव रिजाल, जीवन ज्ञवाली, विराट नेपाल र आकाश चौधरीमध्ये गुहार दिन गएकै जीवन ज्ञवालीले पनि बलात्कार गरेको त्यी युवतीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन्।स्थानीय ज्ञवाली प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका गैडहवा गाउँपालिका संयोजक हुन्।
रातको समयमा भएकाले बलात्कार गर्ने मध्येमा गुहार दिन गएका जीवन ज्ञवाली र फोन गरेर बोलाउने चौधरीलाई मात्र चिनेको उनीहरु बताउँछन्। ‘लाठी सहित म र केटाहरु साथी भएको ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ धेरै केटाहरु थिए, त्यो बेला नै हामीलाई दुईतिर लगेर पालैपालै बलात्कार गरे–पीडित युवतीले भनिन्–‘कपडा समेत सोही स्थानमा खोलिदिएपछि विष्णुले नै दिएको टिसर्ट र सल बेरेर बाहिर निस्केकी थिएँ।’
बलात्कार गरेपछि पनि चौधरीले ‘बाहिर कुरा गरे ठिक नहुने भन्दै’ धम्काएको पीडित युवतीको भनाई छ। उनीहरुका अनुसार विष्णुले पछि फोन गरेर साथीहरु बोलाएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। घटनाको मुख्य दोषी मानिएका चौधरी अहिले फरार छन्।
गैडहवा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक ज्ञवालीसहितले सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि मात्रै घटना बाहिर आएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी निरीक्षक शंकर पोखरेलका अनुसार स्थानीय विष्णु थारु र स्थानीय जीवन ज्ञवाली बलात्कारमा संलग्न थिए। अरु १२ युवाहरुको भने पहिचान हुन सकेको छैन।
गुहार दिन गएका मध्ये जीवन ज्ञवालीलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले पक्राउ गरेको छ भने बाँकी ४ जनालाई तारेकमा छाडेको छ।उद्धारका लागि आएका ज्ञवाली सहितका युवाहरुले सामुहिक बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले जाहेरी दिएको प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले बताए।
उनले जाहेरी दर्ता गरेर जबरजस्ती करणी मुद्दा अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी ज्ञवालीलाई पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताए।
घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका विष्णु थारु र अरु युवालाई स्थानीय नेकपाका नेता तथा विष्णुका बाबु कल्लु थारुले भगाएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनले ३ दिनभित्र प्रहरीमा उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भनिएका अधिकृत ज्ञवालीले आफु माथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
घटनाको गैडहवा गाउँपालिका ९ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर बलालले पनि पुष्टि गरेका छन्। उनले युवतीमाथि सामुहिक बलात्कार गरेको पिडित युवतीहरुले बताएको उल्लेख गरेका छन्।सामूहिक बलात्कारपछि गम्भीर अवस्थामा दुवै युवतीहरुको स्वास्थ्य उपचार गरिएको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक ज्ञवाली जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेको पुष्टि गरे । उनले युवतीहरुमाथि भएको बलात्कार घटनामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि आफुले पनि पहल थाल्ने बताए।
उनले सामुहिक बलात्कारको शिकारमा परेको दुई युवतीलाई गैडहवा गाउपालिकाले सहयोग रकम दिएको बताए। अति विपन्न परिवारका उनीहरुलाई गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार उपचार खर्च भन्दै १०/१० हजार दिएको छ।देशसञ्चारबाट